प्रचण्डजीहरुको गतिविधिले राजतन्त्र फर्कने पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ : दिलनाथ गिरी - Ratopati
- | प्रमुख सचेतक, राप्रपा नेपाल एमाओवादीले एकाएक आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने पहल थालेसँगै अहिले राजनीतिक माहौल तातेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख सत्ता साझेदार दल राप्रपा नेपालको के धारणा रहेको छ ? यी सहित पार्टीको विवादबारे केन्द्रित रहेर राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसँग रातोपाटीका लागि राजकुमार सिग्देल र सुजन पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एकाएक सरकार परिवर्तनको कुरा उठेसँगै राजनीतिक माहौल तातिएको छ । त्यसबीचमा राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएको पनि भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ ?
जुन किसिमको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको चरणमा अगाडि आइरहेको थियो । अप्रत्याशित रुपमा सरकारलाई अस्थिरता बनाउने वा विघटन गर्ने खेल सूरु भयो । यो चाहिँ अकल्पनिय हो । बेमौसमको बाजा बजाएको जस्तो स्थिति हो । किन यो परिस्थिति आयो त भन्दा हामी त मुलुकलाई आर्थिक क्रान्ति गरेर नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेर सबै अगाडि जाने भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र नेपाललाई एउटा समृद्व बनाउनको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा आज त्यसलाई नै बाधा पुग्ने प्रकारबाट जुन ढंगबाट सरकार परिवर्तनको कुरा अप्रत्याशित रुपमा आयो । यसलाई बेमौसमको बाजा नै भन्न सकिन्छ ।
किनकि यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हैन । यो कसको हितमा आयो किभने प्रचण्डले दुई दिन अगाडि विजय कुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा अहिले सरकार परिवर्तनबारे कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका थिए । तर, त्यहाँबाट फर्किएको २४ घण्टा पनि बित्नै नपाइकन उहाँ सरकारको निमित्त लालयित किन हुनुभयो ? उहाँले बारबार भन्नुभएको थियो कि –‘हामी यो सरकारलाई दृढताका साथ अब आउने निर्वाचनसम्म हामी लिएर जान्छौं । जनताका आवश्यकता र आकंक्षालाई हामी पूरा गर्छौं ।’
तर, अचानकमा यो स्थिति किन आयो भन्ने सायद उहाँलाई पनि थाहा छैन । यो कहाँबाट कसरी भयो ? कसले उहाँलाई प्रयोग गर्यो ? माओवादीका धेरै नेताहरुसँग छलफल हुँदा उहाँहरुले पनि आश्चर्यचकित मान्नुभएको छ । यो सबै परिस्थितिमा मैले के देखेको छु भने जोग्राफिकल च्यानलमा देखिन्छ नि – सिंहले सिकार गर्छ । तर, खान पाउँदैन र खोसिदिन्छ । त्यस्तो परिस्थिति त हुने होइन । उहाँलाई आज प्रधानमन्त्रीको लोभ त देखाइयो, त्यसबाट प्रभावित भएर सरकार विघटन गर्नेतर्फ जानुभयो । किनभने उहाँ प्रयोग नभइकन यो सरकार विघटन नै हुँदैन ।
यो मुलुकलाई जहिले पनि अस्थिर बनाउने, विदेशीहरुको खेल मैदान बनाउने, जनताका भावना र चाहनालाई जर्बजस्ती निमोठेर कमजोर बनाउने विदेशीहरुको २००७ सालदेखिकै खेल हो ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा अग्रणी आर्थिक हैसियत भएको मुलुकमा चीन पुगिसकेको छ, भारत पछिपछि छ । विश्वका धेरै मुलुकहरु जुन किसिमको आन्दोलपछि उपनिवशेबाट मुक्ति भएपछि सम्पन्न भएका छन् । दक्षिण कोरियाको हिजोको स्थिति हेर्नुस् समस्यैसमस्या थियो । आज त्यो देश आत्मनिर्भर भएर समृद्व राष्ट्र बनेको छ । ३० वर्षमा सिंगापुर विश्वकै एउटा नमूना र सम्पन्न देश बनेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरु सम्पन्न भए ।
हामी किन अरु देशजस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली हुन सकेनौं ? किनकि हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरुको इमान्दारिता संकटमा परेको छ । हामी कोही इमान्दार भएनौं राष्ट्रको लागि । जनताको लागि इमान्दार हुन सकेनौं । हामी अर्काको खटनमा हिँड्ने नेता र कार्यकर्ता भएका हुँदा देश कमजोर भयो र अरु देश हाम्रै कारण हराभरा, सम्पन्न र समृद्व बने भन्ने लाग्छ ।
१० वर्ष आन्दोलन गरे आउनुभएका प्रचण्ड राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनिन्छन् । उहाँ जस्तो क्रान्ति गरेर आउनुभएका नेताबाट मुलुकले स्थायीत्व पाउँछ, देशमा अस्थिरता समाप्त हुन्छ भन्ने जुन सोच थियो त्यो हुने संकेत देखिएन । यो भन्दा ठूलो दूर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ?
पछिल्लो विकसित राजनीति घटनाक्रमबारे राप्रपा नेपालको धारणा के हो ?
अहिले मुलुक गम्भीर परिस्थितिमा छ । मुलुकमा यस्तो असहज परिस्थितिको निर्माण होला वा मुलुकले त्यस दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्ला भन्ने कल्पना समेत भएको थिएन । अकल्पनिय रुपमा अहिलेको परिस्थित आएको छ । जुन ढंगबाट मुलुकलाई अस्थिरतामा ल्याउने, नेपाली जनताको समृद्धिको ढोका बन्द गर्ने र नेपाललाई अस्थिर बनाउन विदेशी चलखेल भएको छ, यो दुःखदायी छ । मुलुकको लागि यस्तो परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य हो ।
अब तपाईंको पार्टी राप्रपा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
राप्रपा नेपाल वास्तवमा मुलुकको विद्यमान जो समस्या थियो, भूकम्पको समस्या, बाढीपहिरोको समस्या, नाकाबन्दीको समस्या, मधेस आन्दोलनको समस्या, यी विविध समस्याहरुको मुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले यो सबै समस्या हामी समाधान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्वता राखेको हुँदा त्यसमा सहभागि भएका हौं ।
हिजोको गम्भीर परिस्थिति अहिले विस्तारै सहज हुँदै आएको थियो । मुलुक त्यत्रो भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न एउटा प्राधिकरण गठन भएको थियो । काम पनि सुरु गरेको थियो । अर्कोतिर नाकाबन्दी अन्त्य भयो । मधेस आन्दोलने समाधानको दिशातर्फ थियो ।
यसो हुँदाखेरी ढिलो चाँडो समस्याको समाधान भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र नै हो ।
चीनसँग समेत वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता गरेर मुलुक अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अचानक जुन ढंगबाट यो सरकार परिवर्तनको कुरा आयो यो नेपाल र नेपाली जनताको आकंक्षा, विश्वास र चाहनाविरुद्वमा विदेशीहरुद्वारा चलाइएको डिजाइन हो । त्यसको गोटी प्रचण्ड हुनुभयो की भन्ने आशंका लागेको छ ।
अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संसद् विघटन हुने संकेत र राजसंस्था फर्किने हो भन्नेसम्मका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
राजसंस्था हाम्रो एजेण्डा नै हो । संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासनले मात्र मुलुकलाई समृद्व बनाउन सकिन्छ ।
तर, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा हामी पराजित भयौं । तरपनि यो मुद्दालाई हामीले छाडेका छैनौं । संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेर जनताको चाहना पूरा गर्छौं भनेर हामी हिँडेकै हौं ।
तर, तिथिमित त म भन्न सक्दिन । यही किसिमका कामकारबाही अघि बढे राजसंस्था फर्किन्छ । मुलुकलाई जोगाउनको लागि राजसंस्था नल्याइकन अरु कुनै विकल्प छैन । हिन्दुराष्ट्र कायम नगरी यो राष्ट्र समृद्व बन्न सक्दैन । हामी एउटा विधि र प्रक्रियाबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र बनाउने लक्ष्य बोकेर हिँडेका हौं ।
अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश गरेपनि कहाँ कसरी दर्ता हुने त्यसको प्रक्रिया के रहने भन्ने विषय नै छैन । संविधानमा छ, अविश्वासको प्रस्ताव । तर, त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि नियमवाली चाहिन्छ । नियमवालीको व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको हुँदाखेरी त्यहाँ अर्को संवैधानिक क्राइसिस आउँछ ।
संसद विघटनबारे चाहिँ ?
हिजो सबै दल मिलेर अब आउने निर्वाचन सम्पन्न नगरुन्जेल सम्मसँगै जाने भन्ने प्रतिबद्वताका साथ नेकपा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाललगायत १४ वटा संसद्का घटकहरु मिलेर यो सरकार बनाइयो । सरकारमा त्यो लक्ष्यमा जानको निम्ति अरु सबै प्रतिबद्व छन्, हिँडेकै छन् । तर, अचानक एकाएक यो संरचनालाई भत्काउनको निमित्त प्रचण्डजी किन तयार हुनुभयो त ? संविधानमा यस्तै अस्थिरता रहिरह्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले के अवसर दिएको छ भने धारा ७ को उपधारा ५ मा यदी संविधानभित्र संकट भयो र अविश्वास प्रधानमन्त्रीभित्र रह्यो भने त्यो अवस्थाको निकासका लागि हामीसँग नियमवाली छैन । अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश गरेपनि कहाँ कसरी दर्ता हुने त्यसको प्रक्रिया के रहने भन्ने विषय नै छैन । संविधानमा छ, अविश्वासको प्रस्ताव । तर, त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि नियमवाली चाहिन्छ । नियमवालीको व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको हुँदाखेरी त्यहाँ अर्को संवैधानिक क्राइसिस आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचनको लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न सक्छन् भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचन गर्न अनुमति दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
तपाईले भन्नुभयो नि हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था राप्रपा नेपालको एजेण्डा हो । तर, तपाईंहरुले सबै मुद्दा छाडेर सरकारमा जानुभयो । अब हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा पनि कांग्रेसले लिने देखिन्छ । यो अवस्थामा तपाईंहरु चुनावमा जाँदा के एजेण्डा लिएर जानुहुन्छ ?
मुद्दा हाम्रो हो । नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो । जनताको आकर्षण राप्रपा नेपाल भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसले पनि यो मुद्दा अनुसरण गर्न खोजेको हो । यो राम्रो कुरो हो । किनभने प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विश्वासको आधारमा चलिरहने प्रणाली हो । नेपाली जनतालाई थाहा छ हिन्दुराष्ट्र राप्रपा नेपालको एजेण्डा हो ।
हामीले एजेण्डा छाडेको भनेर जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो देशी/विदेशीहरुले लगाएको आरोप हो । बारबार भनेको छु, राप्रपा नेपाल भनेको एउटा शरीर हो भने त्यसको प्राण भनेको त्यो एजेण्डा हो । प्राण शरीरबाट बग्यो भने त्यो लाश हुन्छ । राप्रपा नेपालले आफ्नो एजेण्डा छोड्यो भने मृततुल्य हुन्छ । त्यसैले गर्दा राप्रपाले यो एजेण्डा छोडेको छैन । मात्र विधी र प्रक्रियामा पराजित भएका हौं ।
तपाईं यसो भन्नुहुन्छ, तर चौतर्फी रुपमा राप्रपा नेपालले सबै एजेण्डा छाड्यो भन्ने छ त !
नेपाली जनताको चाहनाअनुसारको वातावरण निमार्ण गर्नका लागि हामी सरकारमा गएका हौँ । त्यसो भए फरक मत, फरक विचार राख्ने राप्रपा नेपाल हो भन्ने जान्दा जान्दै सरकारमा हामीलाई किन सहभागी गराएको त ? त्यहाँ सहभागी हुनु भनेको त राप्रपा नेपालले उठाएको मुद्दा सही हो भन्ने प्रमाणित हुनु हो नि । त्यसैले हामी यो राष्ट्रलाई जोगाउन र अन्य दललाई कन्भिन्स गर्न सरकारमा गएका हौँ ।
तपाईले लामो समयदेखि ओली सरकारको औचित्य छैन भन्दै आउनुभो , तर फेरि उनकै बचाउमा हुनुहुन्छ । यो त दोहोरो चरित्र भएन र ?
उहाँले सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता राख्नुभएको थियो । उहाँले हामीलाई जनताका लागि गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्छु भनेर आव्हान गरेपछि हामी सरकारमा गएका हौँ । त्यो प्रतिबद्धता उहाँले पुरा गर्नुभएन भन्नेसम्म कुरा हो । तर, पुरा त गर्दै हुनुहुन्छ नि । नाकाबन्दीको व्यवस्थापन भयो, मधेस आन्दोलन स्थगित भएको छ । वार्ता कमिटी बनाएका छौं । चीनसम्मको सम्बन्धमा वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता गर्यौ । भारतवेष्ठित मूलुक थियो भने उहाँले भूपरिवेष्ठित मूलुक बनाउनुभयो । त्यो सफलता पनि छ । सँगसँगै अब चाहिँ प्राधिकरणको संचरना गरेर भूकम्पबाट क्षतविक्षत परिवारलाई राहत दिन युद्धस्तरमा काम अघि बढीरहेको अवस्था छ । यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर अगाडी बढ्नुस् भनेको हो । काम नगर्नुस् भनेको होइन । उहाँ कुनै पनि काम गर्नका निमित्त जादुको छडी त होइन । समय त दिनुपर्छ । निश्चित समयभित्र उहाँले कबूल गरेको काम पुरा गर्नसक्नु भएन भने उहाँले छुट्टी लिनुपर्छ, उहाँ सत्तामा बसिराख्नुहुदैँन भन्ने मेरो मनसाय हो ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता औल्याउनुभएको छ । के प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्टिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ ?
यो अहिले सन्दर्भ नै मिलेन । उहाँ यो सरकारमै हुनुहुन्छ । उहाँले नै रोजेका मन्त्रालयहरु पाउनुभएको छ । उहाँले नै रोजेको आपुर्ति मन्त्रालय अहिले जनतालाई असहज र कष्टकर बन्न बाध्य छन् । अहिले नाकाबन्दी पनि छैन । हिजोभन्दा बढी ग्यास, तेल, पेट्रोल आइरहेको छ तर किन अभाव छ अहिले ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ ? यो प्रश्न मैले हिजो सदनमा समेत उठाएको छु ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा तपाईको पार्टीले बहुमतिय पद्धतीअनुसार कसलाई समर्थन गर्छ ? अहिले प्रचण्डजीले आधिकारिक रुपमा सरकार छाडिसक्नुभएको छैन । त्यो परिस्थितिको निमार्ण पनि भएको छैन । त्यसैले परिस्थिति कस्तो बन्छ हेर्छौं र त्यसमा नेपाली जनताको हितमा के काम गर्दा राम्रो हुन्छ हामी त्यही गर्छौं ।
बजेट अधिवेशनबारे कुरा गरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होला ?
सकेन भने अर्को दुग्भार्य । अहिलेको संविधान भनेको ७० वर्षपछिको नेपाली जनताको आकांक्षाले प्रतिक्षा गरेको संविधान हो । यो संविधानले जनताका सबै समस्या समाधान गर्छौं भनेर ल्याएको संविधान हो । त्यो संविधानले ल्याएको आर्थिक वर्षको पहिलो बजेट हो यो । त्यो बजेटलाई यदी अवरोध गरिन्छ भने मूलुकको विकास र समृद्धिको ढोका बन्द गर्ने काम हुन्छ ।
त्यो लफडा नियोजित रुपमा देशी र विदेशीहरुले हामीलाई कमजोर बनाउन गरेको एउटा प्रयोग हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो मूलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध गर्ने, विभेदरहित वातावरण निर्माण गर्ने र मधेसका मुद्दाहरुदेखि लिएर समस्याहरु जति छन् ति समस्याहरुलाई समाधान गर्नसक्ने बजेट ल्याएर राष्ट्रनिमार्णमा अगाडी बढ्ने किसिमको हुनुपर्छ । हरेक तह र तप्काका मानिसले पनि यो बजेट मेरो हो भनेर गर्व गर्नसक्ने स्थितिको हुनुपर्छ ।
फरक प्रसंगमा जाऔं, तपाईको पार्टीको लफडा के हो ? त्यो लफडा नियोजित रुपमा देशी र विदेशीहरुले हामीलाई कमजोर बनाउन गरेको एउटा प्रयोग हो ।
तपाई केशरबहादुर विष्ट निलम्बनको पक्ष कि विपक्षमा ?
म पक्षमा पनि होइन र विपक्षमा पनि होइन । उहाँ मेरो एक असल मित्र हुनुहुन्छ र हामी सबैले पार्टीमा बस्दा पार्टीको विधि, विधान, नियम मान्नुपर्छ र त्यो नमान्दा पार्टीले सबैलाई कारबाही गर्छ ।
तपाईले विधी विधानको कुरा गर्नुभयो तर उहाँले त राप्रपा नेपालले विधी विधान छाड्यो भनेर भन्नुभएको छ नि ?
राप्रपा नेपाललाई उहाँले बुझ्न थालेको ३ वर्ष मात्रै भयो । पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदा हाम्रो ज्यान जाने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा नेतृत्व गरेर कमल थापाजी आउनुभएको थियो भने अहिले कमल थापा गलत र उहाँ सही भन्ने स्थिति कसरी हुन्छ ? जून बेला हाम्रो ज्यान जोखिममा थियो उहाँ गणतन्त्रमै हुनुहुन्थ्यो । हिन्दू राष्ट्र चाहिदैँन, संवैधानिक राजतन्त्र चाहिदैँन, गणतन्त्र नै ठीक छ भन्ने पक्षमा उहाँ उभिनुभएको थियो । अहिले कुन शक्तीले उहाँलाई हाम्रो एजेन्डाको विषयमा कन्पूmजन सिर्जना गरेका छन् त्यो उहाँलाई थाहा होला र अरुले पनि बुझेका छन् ।
तपाईले जसरी केशरबहादूर विष्टको आलोचना गर्नुभएको छ । त्यही ढंगले पद्मसुन्दर समूहलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो । यसरी तपाईहरुले आलोचना गर्दागर्दै राप्रपा नेपाल टुक्राटुक्रा भइसक्यो । के राप्रपा नेपाल कमल थापाको शक्तिले मात्रै टिकेको पार्टी हो ?
जून कुरा तपाईले उठाउनुभयो निकै महत्वपूर्ण छ । यहाँ पार्टीको सिद्धान्त, विचार, मुल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर आएका मान्छेहरु हुन्छन् । र त्यो मान्छेहरुले उठाएको यो जून किसिमको मुद्दा हो । त्यो मुद्दालाई अगाडी बढाउन निरन्तर संघर्ष गरिरहेको अवस्था हाम्रो हो । तर, जून किसिमको कन्फूजनको स्थिति अहिले आएको छ । हिजो पद्मसुन्दर र आज केशर बिस्टको नाममा आएको छ । धेरै पार्टीहरु अलमलमा छन् र गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् ।
हाम्रै पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो जो कमल थापाकै नेतृत्वमा चारवटा सिटबाट चौथो शक्तिमा पुगेको हो । त्यो किनभन्दा कमल थापाको नेतृत्व बलियो छ र यसलाई कमजोर बनाउन देशी–विदेशी शक्ति न्वारनदेखिको बल निकालेर लागेका छन् ।
पार्टीलाई महत्वपूर्ण शक्ति बनाउने भन्नुहुन्छ, तर पार्टी विवादमा डुबेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी बन्नसक्छ महत्वपूर्ण शक्ति ?
कुनै पनि बिरुवा रोपिसकेपछि विरुवालाई विभिन्न रोगहरुले आक्रमण गर्छन् । तर, त्यसलाई जोगाउने हो भने उपचार गर्नुपर्यो । हामीलाई पनि यो पार्टीभित्र कसरी घात र आक्रमण गरेका छन्, त्यो रोगबाट कसरी उपचार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसो हुदाँ हामीमा विचलन छैन ।